Inona ny faneken'ny lalàna? | Valin'ny Fanamarinana
Home Lalàna Inona ny faneken'ny lalàna?
The Ireo fandikan-dalàna ara-nofo dia mihatra any Angletera sy Pays de Galles amin'ny 2003, ary ny lalàna momba ny firaisana ara-nofo any Skotlandy tamin'ny 2009, namaritra ny dikan'ny fanekena ho an'ny tanjon'ny fanenjehana eo ambanin'ny lalàna momba ny heloka bevava.
Ny lalàna dia namolavola ny famaritana nentim-paharazana momba ny fanolanana mba hampidirana ny maha-lahy sy maha-vavy azy ary mahatonga azy ho fandikana ny "olona (A) hiditra amin'ny pneu ny vagina, [ary ankehitriny] ny anus na ny vavan'ny olon-kafa (B), na tsianjery na tsia, raha tsy manaiky izany olona izany, ary tsy misy finoana azo ekena izay heverin'i B. "
Araka ny lalàna Scottish, "midika ho fifanarahana malalaka ny fanekena."
"59. Ny andininy faha-2 (a) dia manondro fa tsy misy fifanarahana maimaimpoana izay misy ny fihetsika amin'ny fotoana tsy ahafahan'ny mitaraina, noho ny vokatry ny alikaola na zavatra hafa, ny fanekena izany. Ny vokatr'ity zana-pizarana ity dia tsy hoe tsy afaka manaiky ny hanao firaisana ny olona aorian'ny fisotroany zava-pisotro misy alikaola na zava-mahamamo. Mety nisotro toaka (na zava-mahamamo hafa) ny olona iray, ary mety mamo mihitsy aza, nefa tsy nanary ny fahafahany nanaiky. Na izany aza, amin'ny fotoana mahamamo azy ka very ny fahafahany misafidy ny handray anjara amin'ny fanaovana firaisana, izay firaisana ara-nofo rehetra atao, dia manao izany raha tsy nahazoana alalana avy amin'ny mpitaraina. ”
Inona izany eo amin'ny sahan-kevitra? Amin'ny lalàna sivily, rehefa manao fifanarahana ohatra, ny fanekena dia midika ho fanekena ny zavatra iray ihany. Amin'ny lalàna heloka bevava, midika zavatra hafa mitovy amin'ny fahazoan-dàlana izany. Ireo sehatra ara-dalàna dia samy mikatsaka ny hampiditra hevitra momba ny fampiasana sy ny fanararaotam-pahefana ao anatiny. Ny famaritana ny 'fanekena' dia iray amin'ireo faritra sarotra indrindra amin'ny lalàna heloka bevava amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Misy antony telo lehibe mahatonga izany.
Voalohany, sarotra be ny mahafantatra izay atao ao an-tsain'ny olona iray hafa. Mampihetsi-po ny filazana fa ny firaisana ara-nofo dia tsara amin'izao fotoana izao na fanasana hanomboka mampiaraka amin'ny fahafahana mampifankatia amin'ny fotoana manaraka? Fahamendrehana ara-tsosialy ve sa fahendrena ho an'ny lehilahy ny manankery kokoa amin'ny 'famporisihana' ny vehivavy mba hiaraka amin'izy ireo amin'ny firaisana ara-nofo ary ny vehivavy hanaiky kokoa sy hanaraka azy ireo? Ny fijerena sary vetaveta amin'ny Internet dia azo antoka fa manandratra ny fomba fijerin'ny mpivady.
Faharoa, ny fanaovana firaisana dia matetika atao amin'ny mitokana tsy misy vavolombelona. Midika izany fa raha misy ny fifanolanana amin'ny zava-nitranga dia tsy maintsy mifidy ny tantaran'ny olona iray ny mpitsara amin'ny ankapobeny. Matetika izy ireo dia mila mamantatra amin'ny porofo ny zava-nitranga talohan'ny zava-nitranga momba izay mety tao an-tsain'ny antoko. Ahoana ny fihetsik'izy ireo tao amin'ny fety na tany amin'ny trano fisotroana na ny toetran'ny fifandraisan'izy ireo taloha, raha misy izany? Raha ny fifandraisana dia natao tamin'ny Internet irery ihany dia mety ho sarotra kokoa ny manaporofo.
Fahatelo, noho ny fahorian-tsaina izay mety ho vokatry ny fanafihana ara-nofo, dia mety hiovaova ny fahatsiarovana ny zava-misy sy ny fanehoan-kevitra na fanambarana natao vao haingana. Mety ho sarotra amin'ny olona ny mahafantatra izay tena nitranga. Vao mainka sarotra ny zava-misy rehefa mihena ny toaka na ny zava-mahadomelina.
Ny fanamby ho an'ny tanora dia ny ampahany mampihetsi-po ao amin'ny ati-doha dia ny fanafainganana azy ireo mankamin'ny filan'ny nofo, ny fanaovana risika ary ny fanandramana, raha mbola tsy mivoatra tanteraka kosa ny ampahany misaina ao amin'ny ati-doha izay manampy amin'ny fametahana ny freins amin'ny fihetsika mampidi-doza. Vao mainka mihasarotra izany rehefa alikaola na zava-mahadomelina no mifangaro. Raha mety ny tovolahy dia tokony hangataka 'fanekena mavitrika' amin'ny firaisana ara-nofo ary hitandrina tsara amin'ny fanekena mino fa nomena ny mpivady raha mamo. Ampianaro ny ankizy ity dia asehoy ity mampihomehy ity sarimiaina momba ny fanekena ny kaopy iray dite Izy io dia tena mora ary manampy amin'ny famitana ny teboka.
Ny fanekena voambara dia endrika fanekena mampiady hevitra izay tsy omen'ny olona mazava, fa kosa nofaritana tamin'ny fihetsiky ny olona iray sy ny zava-misy ary ny toe-javatra miseho manokana (na amin'ny tranga sasany, amin'ny fahanginan'ny olona na ny tsy fihetsiny). Taloha, ny mpivady iray dia noheverina fa "nanaiky an-kolaka" ny hanao firaisana ara-nofo, fotopampianarana mandrara ny fanenjehana vady noho ny fanolanana. Ity fotopampianarana ity dia heverina ho lany andro any amin'ny ankamaroan'ny firenena. Ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia anefa dia mety hitarika ny lehilahy sasany hanao izay fara heriny hanerena ny vehivavy hanao firaisana nefa tsy eken'izy ireo. jereo ity tantara ity avy any Aostralia.
<< Age ny fanekena Inona no atao hoe fanekena amin'ny fampiharana? >>